Esports နဲ့ Gamers တွေအတွက် တရားဝင် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဘီယာ – Gaming Noodle
Esports ရဲ့ တရားဝင် ဘီယာအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားတာ ဘယ်တံဆိပ်ဖြစ်မလဲ?
အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ “Esports ရဲ့ တရားဝင် ဘီယာ” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို မူပိုင်ခွင့် ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ “ဂိမ်မာတွေရဲ့ တရားဝင် ဘီယာ” “ဂိမ်းဆော့ခြင်းရဲ့ တရားဝင် ဘီယာ” ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေကိုပါ မူပိုင်ခွင့် ထပ်ယူခဲ့ပါတယ်။
အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စိမ်းနေနိုင်နိုင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဘီယာ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ “Budweiser” (ဘတ်ဝိုင်ဇာ) ကိုတော့ တကမ္ဘာလုံးသိကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် ကုမ္ပဏီဟာ Budweiser အပြင် Hoegaarden, Stella Artois, Michelob အစရှိတဲ့ Brand ပေါင်း ၁၀၀ ကို ပြုလုပ်၊ တင်ပို့၊ ရောင်းချနေတာပဲ ဖြစ်ပါဆယ်။
အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် ကုမ္ပဏီရဲ့ US Sports Marketing အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ “နစ် ကယ်လီ” ကတော့ အားကစားဆိုတာ အမျိုးအစား အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာ NFL (အမေရိကန် Football League) ရဲ့တရားဝင်ဘီယာဖြစ်ဖို့ဆိုရင် သူတို့နဲ့ အပေးအယူတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Esports ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ Esports ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မပိုင်ဘူး။ ဒါကိုကျတော်တို့က အခွင့်ကောင်းယူလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် မူပိုင်ခွင့်ရယူထားတဲ့ “Official Beer of Esports”, “Official Beer of Gamers” နဲ့ “Official Beer of Gaming” စတဲ့စာလုံးတွေကို Digital Marketing ပြုလုပ်ရာမှာ အဓိက အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ကြေညာထားပြီး လက်လီရောင်းချရာမှာလည်း အသုံးပြုမယ်လို့ ကယ်လီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် အနနဲ့လည်း Esports လောကနဲ့ အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၉ ဧပြီလမှာ Overwatch League အနေနဲ့လည်း အန်ဟွိုင်ဇာ-ဘုရှ် ရဲ့ ဘီယာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “Bud Light” ကိုလည်း တရုတ်ပြည်မှ အပ Official beer of the league အဖြစ် သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၈ တုန်းကလည်း NBA 2K League အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Washington Wizard ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Wizard District Gaming အသင်းကိုလည်း စပွန်ဆာ ပေးခဲ့ပါတယ်။
Esports ရဲ့ တရားဝငျ ဘီယာအဖွဈ မှတျပုံတငျထားတာ ဘယျတံဆိပျဖွဈမလဲ?
အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ ဆိုတဲ့ အမရေိကနျကုမ်ပဏီဟာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုနိုငျငံရဲ့ အမှတျတံဆိပျ မူပိုငျခှငျ့ မှတျပုံတငျရုံးမှာ “Esports ရဲ့ တရားဝငျ ဘီယာ” ဆိုတဲ့ စာလုံးကို မူပိုငျခှငျ့ ရယူခဲ့ပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပဲ “ဂိမျမာတှရေဲ့ တရားဝငျ ဘီယာ” “ဂိမျးဆော့ခွငျးရဲ့ တရားဝငျ ဘီယာ” ဆိုတဲ့ စာလုံးတှကေိုပါ မူပိုငျခှငျ့ ထပျယူခဲ့ပါတယျ။
အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ ကုမ်ပဏီဆိုတဲ့ နာမညျကတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ စိမျးနနေိုငျနိုငျပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ဘီယာ အမှတျတံဆိပျဖွဈတဲ့ “Budweiser” (ဘတျဝိုငျဇာ) ကိုတော့ တကမ်ဘာလုံးသိကွမှာ အသအေခြာပါပဲ။ အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ ကုမ်ပဏီဟာ Budweiser အပွငျ Hoegaarden, Stella Artois, Michelob အစရှိတဲ့ Brand ပေါငျး ၁၀၀ ကို ပွုလုပျ၊ တငျပို့၊ ရောငျးခနြတောပဲ ဖွဈပါဆယျ။
အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ ကုမ်ပဏီရဲ့ US Sports Marketing အကွီးအကဲ ဖွဈသူ “နဈ ကယျလီ” ကတော့ အားကစားဆိုတာ အမြိုးအစား အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဥပမာ NFL (အမရေိကနျ Football League) ရဲ့တရားဝငျဘီယာဖွဈဖို့ဆိုရငျ သူတို့နဲ့ အပေးအယူတှေ လုပျဖို့လိုတယျ။ Esports ကတော့ အဲလိုမဟုတျဘူး။ Esports ဆိုတာကို ဘယျသူမှ မပိုငျဘူး။ ဒါကိုကတြျောတို့က အခှငျ့ကောငျးယူလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ” လို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ထို့အပွငျ မူပိုငျခှငျ့ရယူထားတဲ့ “Official Beer of Esports”, “Official Beer of Gamers” နဲ့ “Official Beer of Gaming” စတဲ့စာလုံးတှကေို Digital Marketing ပွုလုပျရာမှာ အဓိက အသုံးပွုသှားမယျလို့ ကွညောထားပွီး လကျလီရောငျးခရြာမှာလညျး အသုံးပွုမယျလို့ ကယျလီက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ အနနဲ့လညျး Esports လောကနဲ့ အစိမျးသကျသကျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၁၉ ဧပွီလမှာ Overwatch League အနနေဲ့လညျး အနျဟှိုငျဇာ-ဘုရျှ ရဲ့ ဘီယာတဈမြိုးဖွဈတဲ့ “Bud Light” ကိုလညျး တရုတျပွညျမှ အပ Official beer of the league အဖွဈ သဘောတူညီမှု ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ ၂၀၁၈ တုနျးကလညျး NBA 2K League အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ Washington Wizard ပိုငျဆိုငျတဲ့ Wizard District Gaming အသငျးကိုလညျး စပှနျဆာ ပေးခဲ့ပါတယျ။
Source : TEO